septembre 2019 · déliremadagascar
Socio-eco	 29 septembre 2019 R Nirina
DORO-TANETIN’NY TSY MIALA VOLA : Tsy hitan’ny tomponandraikitra ny hisakanana azy
Resahana hatrany ny fiovan’ny toetr’andro ankehitriny. Lany andro mampianatra sy mampatsiahy amin’ny tsy tokony handoroana ny tanety sy ny ala any amin’ny faritra arovana ireo tomponandraikitra isankarazany. Continuer la lecture →
Ao anatin’ny paikady ahafahan’ny daholobe mijery sarimihetsika ny fiarahamiasa eo amin’ny Orange sy ny CanalOlympia. Manomboka izao dia mahazo tombontsoa manokana ireo mampiasa ny karatra SIM Orange noho ny fisian’ny tolotra “cinédays”. Continuer la lecture →
Raikitra indray ny Nelson Mandela Cup andiany faharoa izay karakarain’ny 67 City FC ( Grassroot Soccer Academy teo aloha ). Continuer la lecture →
Socio-eco	 24 septembre 2019 lynda
FOFIFA: Mpiasa 200 isa, fito volana tsy nandray karama
Efa feno ny kapoaka ka nitokona tsy niasa ireo mpiasan’ny FOFIFA ( Foibem-pirenena momba ny fikarohana ampiharina amin’ny fambolena). Nanao fitokonana teo anoloan’ny biraon’ny FOFIFA teny Ampandrianomby ny telo ampahaefatry ny mpiasa ny 24 septambra 2019. Continuer la lecture →
Marary 9000 ka hatramin’ny 10.000 no hahazo fitsaboana tsy andoavam-bola. Io no tanjon’ny « Médecins de l’Océan Indien » na M.O.I mandritra ny fandalovany eto Madagasikara. Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 septembre 2019 lynda
Madagascar figure parmi les dix pays les plus vulnérables au changement climatique, accusant en parallèle une perte de près de 90% de sa forêt et est à ce jour l’une des nations les moins bien préparée aux grands changements climatiques. Continuer la lecture →
politique	 23 septembre 2019 R Nirina
Mandeha ny feo fa manana kandida ho ben’ny tanàna ao amin’ny kaominina Alasora ny K25 sy KMMR. Continuer la lecture →
Tao aorian’ny valim-pitsarana ireo mpanao gazety telo sy tale iray ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra dia naneho ny heviny ny mpisolovava azy ireo, ny niharan’ny fitoriana, ny solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tamin’ny anaran’ny TIM sady mpanao gazety ary ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM). Continuer la lecture →
Faritra manan-karena i SAVA raha ny vokatra lavanila, voanio, episy no resahana. Continuer la lecture →
Distrika maro toy an’Antananarivo, Ambanja, Antsohihy, Farafagana, Marolambo, Ambovombe no nahitàna haino vaky jery ary fahitalavitra nomerika nisokatra tampoka tao anatin’ny herinandro vitsivitsy izay, araka ny fanadihadiana nataon’ny foibe fandrindrana ny orinasan-tserasera (DRM). Continuer la lecture →